Banijya News | » ‘सरकारको भूमिकाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान नै सङ्कटमा परेको छ’ ‘सरकारको भूमिकाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान नै सङ्कटमा परेको छ’ – Banijya News
‘सरकारको भूमिकाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान नै सङ्कटमा परेको छ’
पुस २९ , काठमाडौँ ।
कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारको भूमिकाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान नै सङ्कटमा परेको कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले बताएका छन् ।
जीपी कोइराला लोकतन्त्र संवद्र्धन केन्द्रले मंगलबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा देखिएका चुनौती’ विषयक अन्तक्र्रियामा सिटौलाले भने, ‘कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारको भूमिकाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान नै सङ्कटमा परेको छ । नागरिकका अधिकार खोसिदै छन् ।
परेका बेला पार्टी नेतृत्व विधानअनुसार चल्न नसक्दा पाटीभित्र असामान्य स्थिति आएको पनि उनले बताएका छन् । उनले कांग्रेसको ११ पुसमा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले बहुमतको आधारमा गरेका निर्णयलाई लिएर पाटीभित्र देखिएको विवादको समाधान गर्न नेतृत्वले भूमिका खेल्न नसकेको र कमजोरी देखाएको टिप्पणी गरे । उनले जिल्ला सभापतिसँग सभापति देउवाले प्रत्यक्ष छलफल गरेपछि विवाद मिलाउँछु भनेकाले आफूलाई विश्वास भएको बताए ।
कांग्रेसभित्र तेस्रो धारका भनेर चिनिएका सिटौलाले पार्टी सभापति देउवाविरुद्धको मोर्चाबन्दीमा रामचन्द्र पौडेल पक्षलाई सहयोग गरेको हो वा होइन भन्ने अन्योल भइरहेका बेला सिटौलाले पाटीभित्र कुनै पनि नेताको सारथि नबन्ने घोषणा गरेर तेस्रो धार जीवित रहेको सङ्केत दिएका हुन् । उनै सिटौलाले जीपी कोइराला लोकतन्त्र संवद्र्धन केन्द्रले मंगलबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा देखिएका चुनौती’ विषयक अन्तक्र्रियामा दिएको बक्तब्य यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
संविधानले व्यवस्था गरेका सबै संवैधानिक निकायले संविधानभित्रको आफ्नो कर्तव्य, दायित्वलाई इमानदारितापूर्वक बहन गरे भने लोकतन्त्रमाथि कुनै चुनौती खडा हुन सक्दैन । लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हुन्छ । अर्को कुनै तानाशाही व्यवस्था हुन सक्दैन । त्यसमा हामीले राम्ररी ध्यान दिन आवश्यक छ । हामीले निर्माण गरेका संवैधानिक निकायका काम कारबाही, संसदका काम कारबाही र सरकारका काम कारबाही तथा गति विधिप्रति नजर जान आवश्यक छ । म यसको धेरै लामो टिप्पणी र व्याख्य गर्न चाहँदिनँ । संविधानले रचना गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन व्यवस्था हो । यो बहुलवादमा आधारित छ ।
उनीहरुले आफ्नो प्रभाव संविधानभित्रबाट पाएको अधिकार बमोजिम कर्तव्य गर्छन् भन्ने संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ । किनभने संवैधानिक संस्थाहरु सरकारका अनुकूलका संस्था होइनन् । संसदले संविधान विपरीत कुनै कानुन बनायो भने अदालतले त्यो कानुनलाई बदर गर्न सक्छ । अदालतले पनि कसैप्रति पनि पूर्वाग्रह नराखी निष्पक्ष ढङ्गले न्याय दिनुपर्छ भन्ने कुरा संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । तर के आज अदालत संविधानले दिएको निर्दिष्ट कार्यदिशामा आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार बहन गर्न सक्षम छ ? प्रश्न यो छ । अदालतलाई त्यस ढङ्गले काम गर्न दिने के राजनीतिक वातावरण छ ? के संसदले यसबारे सोचेको छ ? अदालतलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम राख्न सरकारले के सहजीकरण गरेको छ ? अर्को प्रश्न यो छ ।
लोक सेवा आयोगभित्रको निष्पक्षतालाई प्रहार हुने खालका कानुन आउन थाले भने लोक सेवा आयोगको सार्वजनिक टिप्पणी आइरहेको छ । यसतर्फ लोकतन्त्रवादीको अत्यन्त चासो रहनुपर्छ । लोक सेवा आयोगमा को आयुक्त रहन्छ, को सदस्य हरन्छ त्यो गौण कुरा हो । तर लोक सेवा आयोग एउटा निष्पक्ष संस्थाको रूपमा रहन्छ कि रहँदैन ? क्षमताको कदर गर्न संस्थाका रूपमा रहन्छ कि रहँदैन ? त्यसलाई हामीले बढो गम्भीरताका साथ हेर्न आवश्यक छ । कानुन नै बनाएर त्यहाँ काम गर्न कर्मचारी खटाउँदा लोक सेवा आयोगको सहमति लिनु नपर्ने, काम गरिरहेका कर्मचारीलाई लोक सेवा आयोगको सहमतिबेगर हटाउने परिस्थिति भयो भने कस्तो अवस्था बन्छ ? यस्तै लोक सेवालाई दिएको बजेट अर्थमन्त्रीको स्वीकृतले मात्र खर्च गर्न पाउने व्यवस्था भयो भने, जो विधेयक अहिले चर्चामा छ । अनि अन्ततः लोक सेवा आयोग सरकारको कमिटेड आयोगका रूपमा जान्छ । त्यसपछि सरकारका मान्छेहरुको भर्ती केन्द्रका रूपमा लोक सेवा आयोग स्थापित हुन्छ । लोतन्त्रका लागि यो अर्को खतरा हो । यस्तै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कुरा आउँछ । यसबारे धेरै चर्चा छन् ।
यस्तो परिदृश्यमा नेपाली काँग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षीमा छ । जसको नेतृत्वमा ००७ सालको क्रान्तिदेखि ६२–६३ को गणतन्त्र र यो संविधान निर्माण भयो । तमाम सङ्घर्ष, आन्दोलन र परिवर्तनलाई नेतृत्व पार्टी नेपाली काँग्रेस यतिबेला के भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ? यहाँ म धेरै भन्दिनँ । साङ्केतिक रूपमा भन्दा आजका दिनमा हामी सक्षम छैनौँ । विगत दुई वर्षमा संसदमा हाम्रो संसदीय दलको भूमिका र बाहिर पार्टी गतिविधिको मूल्याङ्कन गर्दा दह्रो प्रतिपक्षीका रूपमा देखिएन । यो हाम्रा अहिलेसम्मको अवस्था हो । एउटा सानो उदहारण छ– संसदमा सर्वसहमतिले कानुन बनेछ । प्रतिनिधि सभाले पास गरिदियो । अहिले यो यति प्रकरणसँग जोडिन्छ त्यो कानुन । अनि ट्रस्टको विषयमा मेरो ध्यानाकृष्ट गर्‍यो ।
तर अहिले आएर त्यो ऐन पनि संशोधन भएको छ । ऐन संशोधन भई चौपट भइसकेपछि मैले हाम्रा केही साथीहरुलाई के गरेको यस्तो भनेर सोधेको थिएँ, ‘के भएको हो, थाहा पाउँदैनौँ भन्छन् ।’ काँग्रेसको संसदीय दलमा समस्या देखियो । पहिलो वर्ष काँग्रेसको प्रतिपक्षीमा कुनै ठाउँ देखिएन भन्छु म । किनभने सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम ल्यायो काँग्रेस सर्वसहमति जनाइदियो । सायद मलाई लाग्छ विश्वकै बहुदलीय लोकतन्त्र भएको संसदीय व्यवस्थाको इतिहासमा सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रम सर्वसहमतिले पास हुने पहिलो घटना भयो । मैले मेरा सभापतिलाई ‘गल्ती भयो’ भने । त्यसबाट सरकारले कति फाइदा उठायो होला ? सरकार पक्षले विभिन्न देशमा जाँदा भने होलान मेरो नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट सर्वसहमतिले पारित भएको छ । हामीले पहिलो वर्ष प्रधानमन्त्रजीलाई सर्वसम्मत नेता बनाएका छौँ । अब हाम्रो संसदीय दलको नेता तथा पार्टी सभापतिले आफूसहित आफ्ना सांसदहरुलाई जागरुक राख्नुपर्ने अवस्था छ ।
कुनै विधेयक हाउसमा गयो र त्यसमा प्रेसले अलिकति सरोकार राखेको विषय चर्चामा आउँदा हामी सबैको ध्यान खिचेको छ । प्रेसलाई धेरै धन्यवाद छ । सांसदबाट हाम्रो ध्यान खिचिएको छैन, प्रेसका साथीहरुबाट हाम्रो ध्यान खिचिएको छ । प्रेसले लोकतन्त्रवादीलाई जागरुक गराइरहेको छ । त्यसैले काँग्रेसको यो भूमिकाले पुग्दैन । अहिले मानिसहरु पनि भनिरहेका छन्– ‘नेकपाको खैलाबैला बढी आएको छ, सत्ता र बाहिर आएको छ । काँग्रेस कहाँ लुक्यो ।’ त्यस्तैले काँग्रेस नेता कार्यकर्तामाथि एउटा जिम्मेवारी आएको छ, कसरी जनतामा पुग्ने भन्ने ।
डेमोक्रेसी मुभमेन्ट भएन भने डेमोक्रेसी नै रहँदैन । भनिन्छ नि ‘तानाहाशी मर्दा शान्ति हो, लोकतन्त्रको जगरुकता शान्ति हो ।’ चीनको सरकारले भन्छ ‘मेरो देशमा शान्ति छ ।’ हामी लोकतन्त्रवादीहरु भन्दैनौँ त्यहाँ शान्ति भनेर । किनकि त्यहाँ जागरुता छैन । त्यहाँ सत्ता जे भन्छ त्यही संविधान बन्छ, त्यही कानुन बन्छ, त्यही व्यवाहार हुन्छ, त्यही प्रशासन बन्छ, त्यही न्याय बन्छ । यहाँ हाम्रो त्यो होइन । लोकतन्त्रको एउटा मान्यता छ– कुनै पनि कुरा शतप्रतिशत पर्फेक्ट हुँदैन । प्रत्येक ठाउँमा केही न केही अपूर्णता रहन्छ । लोकतन्त्रवादी त्यही अपूर्णताको खोजी गर्छन् । तब समाजलाई पूर्णतातर्फ लैजाने बाटो हुन्छ । पूर्ण भइसक्यो भन्ने हो भने मुख्य प्राप्ति भयो भनेर चुप्प लागेर सुते भैगो । लोकतन्त्रवादीका लागि पूर्ण कहाँ प्राप्त हुन्छ ? यो त सभ्यताको निरन्तरताको विषयमा हो । त्यसैले हामीमा के देखिएको छ भने संविधान ल्यायौँ, माओवादीको हातबाट बन्दुक पनि छुटायौँ । अब शान्ति आयो, पूर्णता भयो हरे राम हरे कृष्ण जपेर राजनीति छोडर घर बसे पनि भयो भन्ने जस्ता खालको मनोविज्ञान देखिएको छ । कुरा त्यो होइन, हामी ७० वर्षको उत्तराधिकारी भएर बसेका छौँ । अनि हामीले हाम्रो काँधको जिम्मेवारी सकियो भन्ने हो भने हामी नै लोकतन्त्रका विरुद्धमा उभिएको अर्थ लाग्छ । मुर्दा शान्तिका पात्र बन्न पुग्छौँ । त्यसैले अब काँग्रेस जाग्ने बेला भएको छ । जनताको अधिकारका लागि जनताको माझमा पुगेर जनताको साथ सहयोगबाट लोकतन्त्रको संरक्षक बन्नुपर्छ । यो व्यवस्था पनि जनताले नै ल्याएका हुन् । यसको रक्षा गर्ने पनि जनता नै हुन् । त्यसैले काँग्रेसले अगुवाइ गर्नुपर्छ । हामी चुप्प लागेर बसेपछि लोकतन्त्रमाथि चुनौती थपिँदै जान्छ । एक वाक्यमा भन्ने हो भने हाम्रो मौनता नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । काँग्रेसले एउटा वक्तव्य दिएर पुग्दैन, ट्विटमा हालेर पुदैन, फेसबुकमा हालेर पुग्दैन । यीसँगसँगै जनताको माझमा पनि पुग्नु पर्‍यो ।
अन्यथा सत्ता अन्धो हुँदै जान्छ । यो सत्ताको नेचर पनि हो । कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हुँदा मात्र यस्तो हुँदैन डेमोक्र्याटको सरकार हुँदा पनि यस्तो खतरा हुन्छ । हामीले भारतमा इन्दिरा गान्धीको सरकार पनि देखेका थियौँ । त्यो डेमोक्र्याटकै सरकार थियो । उहाँले त्यो बेला सङ्कटकाल लगाउनुभयो, भारतमा हङ्गामा भयो । अनि निर्वाचनबाट इन्दिरा गान्धीको सरकार गयो र जनता पार्टी सरकारमा आयो ।